Taliska AFRICOM ayaa sheegay in duqeyn ay la beegsadeen hogaamiyeyaal ka tirsan… – Hagaag.com
Taliska AFRICOM ayaa sheegay in duqeyn ay la beegsadeen hogaamiyeyaal ka tirsan…
Posted on 8 Janaayo 2021 by Admin in National // 0 Comments
Taliska Ciidamada Mareykanka ee Qaaradda Afrika (AFRICOM) ayaa faah faahiyay duqayn Khamiistii ka dhacday deegaanka Saaxa-weyne ee Gobolka Bay.
Taliska ayaa sheegay in duqayntaas oo ahayd mid qorsheysan lagu dilay shan xubnood, kuwaa oo ay ku jiraan hoggaamiyeyaal uu bartilmaameedku ahaa.
General Dagvin Anderson oo ka tirsan Taliska AFRICOM ayaa sheegay in Saraakiishaasi ay fududeeyeen maalgelinta, hubka iyo inay dagaalka iyo qaraxyada sii wadaan dagaalyahanada Al Shabaab.
“Weerarka waxaa lala beegsaday hoggaamiyeyaal Al Shabaab ah oo la yaqaan, kuwaa oo fududeeyey maalgelinta, hubka, maleeshiyada iyo qaraxyada. Mid ka mid ah wuxuu ku lug lahaa weerar horey loogu qaaday Ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida.” Ayuu yiri General Dagvin Anderson.
General Anderson ayaa tibaaxay in sii wadista weerarada joogtada ee lagu kala dhantaallaayo Shabaabka, ay muujineyso ballanqaadkoodii ahaa in hawlgalku sii socon doono, xitaa haddii Ciidamada Mareykanka ka baxaan Somalia.
“Inaan sii wadno kala dhantaalka Shabaab anaga oo adeegsaneyna weeraro joogto ah, waxay muujineysaa inaan weli sii wadno ballanqaadyadii aan u sameynay saaxiibadeena.” Ayuu yiri Jananka.
Xilli Ciidamada Mareykanka ee dalka ku sugan ay ku hawlan yihiin ka bixitaankooda dalka ayaa waxaa haddana muuqata in Mareykanka uu kordhiyay duqaynta ka dhanka ah Al Shabaab, dhawrkii toddobaad ee la soo dhaafay.